Elona Khaya libiza kakhulu eNew Hampshire -New Hampshire Real Estate - Izindlu Ezithengiswayo
Elona Khaya libiza kakhulu eNew Hampshire -New Hampshire Real Estate
Ngokucacileyo, abasunguli beNew Hampshire International Speedway (umkhondo wendlela yomdyarho weNASCAR) abakhange bapompe iziqhoboshi xa besakha ikhaya labo ngo-2000.
UBob Bahre kunye nenkosikazi yakhe uSandy bagqiba kwelokuba bangakhi enye, kodwa amakhaya amabini kubo Ipropathi yeLake Winnipesaukee -Enye yazo kunye nenye yonyana wabo uGary.
Ngokupheleleyo, ezi zindlu zimbini ziqhayisa amagumbi okulala ali-12, izindlu zangasese ezingama-26 kunye neenyawo ezingaphezulu kwesikwere ezingama-63,000. Kodwa ukuba ucinga ukuba ufumana ezimbini kwisivumelwano esinye, cinga kwakhona- ixabiso lixhomile $ 25.8 yezigidi , Oko kuthetha ukuba uya kuziva ngathi uhlawula ngaphezulu kwendlu enye.
Okumangalisayo kukuba, ezi zindlu zimbini zahluke kancinane ngobukhulu kunye noyilo. Ikhaya likaBob noSandy likhulu kwaye libonisa uyilo oluthe kratya kunye nolusesikweni, njengoko kubonwe kwindlela yokungena enkulu kunye neenkcukacha ezihonjisiweyo- jonga:
Umxhasi wePorter-Hayes Umxhasi wePorter-Hayes Umxhasi wePorter-Hayes Umxhasi wePorter-Hayes Umxhasi wePorter-Hayes Umxhasi wePorter-Hayes
Ikhaya lonyana wabo, kwelinye icala, liphantse lalingumfuziselo ka S. Prestley Blake's, umseki wevenkile yokutyela iF Friendly's, awayehlala eyindwendwela njengomntwana okoko utatomkhulu wakhe wayehlala ezantsi kwistrato esivela eBlake. Kodwa uGary wongeze ezakhe izinto azithandayo, ezinje ngezinyuko ezifihliweyo kwibhokisi yeencwadi kwithala lakhe leencwadi kunye nomqolo ongasemva.
Umxhasi wePorter-Hayes Umxhasi wePorter-Hayes Umxhasi wePorter-Hayes Umxhasi wePorter-Hayes
Njengokuba oko kwakunganelanga, iihektare ezili-16.5 zomhlaba zize zize nezigcino zokuzonwabisa eziphume zibuyele emapatini (kwimeko nje).
Ngokucacileyo, eli ayilo khaya lakho liqhelekileyo-yiyo loo nto ithegi yexabiso ingekho naphakathi.
[h / t Ushishino ngaphakathi
wayezalelwe phi uFlorence henderson
Eyona bhanyabhanya yekrisimesi ibalaseleyo ye2019
ice cream banana isityalo
prelit yokungena imithi yekrisimesi